Massacre: Another Bloody Day for Oromo People, Federal Militants (Agazi) is on Killing Spree in Oromia. -
Massacre : Another Bloody day for Oromo people, Federal militants (AGAZI) force is on killing spree in Oromia Region, Chalanko district again. At least 13 people reported to have been shot dead so far, many wounded including kids.
Ummanni Hararge< Shawaa Lixaa, Qeellam, Booranaafi Baalee torbanoota dabran kana keessatti makkalakayaan nu fixuuf deema nurraa kaasaa jechaa ture. Makkalaakayaan kun hayyamaafi affeerraa MNO dhufe moo humnaani jedhees gaafataa ture. Kanaaf, gara MNO deebiin kennames ta’ee furmaanni dhihaate hin jiru.
Har’a Calanqotti duguuggaan raaw’atame waanuma ummanni ofirratti eegaa tureedha. Qeerroon karaa cufuu kan eegalan erga Makkalaakayaan araddaalee Dusee fi Sarkammaa keessatti namoota hedduu rasaasaan fixee booda hiriira nagayaa magaalaatti eegale irratti yennaa dhukaasa banu humna dabalataa ofirraa faccisuufiidha.
Hamma nuti beeknutti Calaqno qaama MNOti. Makkalakaayaan hiriira dhoorguuf aangoo eenyutu kenneef? isni warri MNO keessa jirtan makkalaakayaa kaasuu yoo kan dhabadan taate Oromiyaa guututti ibiddi walirra hin cinne qabachuuf deema. Dandeessan makkalaakayaa baasaa dadhabdan as bayaa himadhaa. Lama hin dhabinaa
Guyyaa boruu wareegamtoota har’a ajjeefamaniif siidaa Calanqoo biratti sirna awwalcha waloo ( mass fineral) ni geggeeffama. Kanaaf ammoo ummanni magaalota naannoo san jiranii garasitti adeema. Sirna kana gufachiisuudhaaf sochiin kamiiyyuu gara makkalaakayaas ta’ee qaama biraatin kan godhamu taanaan taknaafiin cimaan Oromiyaa guututti kan fudhatamu akka tahe isin beeksisuu feena!!
Waldiya University Guyyaa har’a
Wayyaaneen albuuda warqee Dhiha Oormiyaatti argamu dolaara 180,000,000 oliin kubbaaniyaa Inglizii tokktti gurgurachaa jirti. Waliigalteen kunis guyyaa har’aa raaw’atameera. Kun yeroo kanatti godhamuun itti yaadameeti. Gaaffii Oromoon qabeenya isaa irratti kaasaa jiru rukutuuf jecha mootummoota Dhihaa akka Ingliz dirmachiifachuuf akka tahe shakkii hin qabu. Qabeenyaa Oromootiin halagaan duroomee Oromoon hiyyoomuun kana booda bakka hin qabu.